Werwer balaadhan oo ka dhashay talaabooyinka dhagaraysan ee ay xukuumadu kula wareegtay xaruntii Baarlamanka Somaliland | SDWO.COM & SomalilandNews.net
Published on November 14, 2014 by sdwo · No Comments
Magaalada hargeysa iyo guud ahaan dalka oo dhan ayaa aad looga werwerayaa cawaaqabxumada ka dhalan karta xooga ay xukuumadu kula wareegtay golahii baarlamanka Somaliland. Xildhibaanada muxaaafidka ah ee taageera xukuumada oo tiradoodu 50 kor u dhaaftay ayaa u soo tafaxaytay wacadna ku maray in maalinta sabtida ah ay xilka ka qaadidoonaan gudoomiyaha golaha wakiilada Cabdiraxman Cirro. Dhinaca kalana waxa xabsiga dhexe ee Hargeysa caawa loo dhaadhiciyey Xoghayahii guud ee golaha wakiilada oo aan ilaa hada la ogeyn sababta ka danbaysay xadhigiisa iyo cida soo bixisay. Hase yeeshee waxa la ogyahay inuu yahay xunbaha sidaweyn uga biyo diidsanaa xooga ay xukuumadu kula wareegtay golahii shacbiga ee baarlamanka Somaliland.
Waxa laga cabsiqabaa in ay mudaharaadyo balaadhani ka dhacaan dalka gaar ahaan magaalooyinka Hargeysa, Oodweyne, Burco iyo Ceerigoobo, hadii ay xukuumadu kaga dhabayso in gudoomiyaha golaha wakiilada ay xoog ku muqiiniso..
Dhacdooyinka foosha xun oo kale ayaa hore dalka u soo maray ka dib markii xukuumadii Riyaale sidan oo kale ay xarunta golaha wakiilada ula wareegtay taasi oo sababtay mudaharaadyo balaadha oo dadna ku dhinteeb.